Xulka lagu naaneeso sedexda Libaax oo barbardhac gool la’aan ah la galay xulkii ay la ciyaarayeen ee Slovakia | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Xulka lagu naaneeso sedexda Libaax oo barbardhac gool la’aan ah la galay xulkii ay la ciyaarayeen ee Slovakia
Xulka lagu naaneeso sedexda Libaax oo barbardhac gool la’aan ah la galay xulkii ay la ciyaarayeen ee Slovakia
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-06-16 9:02 PM Tababare Roy Hodgson ayaa ku qamaaray bedelkii uu ku sameeyay shaxdiisa iyadoo xulka England ay ku soo baxeen kaalinta labaad Group B iyagoo u soo gudbay wareega 16ka laakiin waxa ay booska kaalinta koowaad u waayeen xulka deriskooda ee Wales. England iyo Slovakia ayaa barbaro goolal la;aan ah ku galay Saint-Ettiene.
Qeybtii hore ee ciyaarta qaab ciyaareedka England waxaa ka maqnaa kaliya inay gool helaan. Waxa ay ciyaarta ka heysteen Slovakia laakiin waxa ay ku guuldareysteen inay shabaqa ka soo taabtaan Martin Skrtel iyo asxaabtiisa.
Jamie Vardy oo dadaal badan sameynayay ayaa helay fursadii ugu fiicneyd ee qeybtii hore ee ciyaarta isagoo kubad hal ka hal ah ku helay goolhayaha Slovakia laakiin waa uu awoodi waayay inuu hareemariyo goolhaye Kozacik waxaana ay darbadiisa ku beegantay goolhayaha.
Adam Lallana iyo Jordan Henderson ayaa iyagana sidoo kale darbooyin halis ahaa laga badbaadiyay, halka Nathaniel Clyne uu weerar joogta ah ka soo qaadayay garabka midig ee ciyaarta, laakiin waxaa lagu kala maray barbaro goolal la’aan ah.
Slovakia ayaa heshay fursad dahabi ah uu hadiyad ahaan u siiyay daafaca England Chris Smalling, ka dib markii karoos ay soo qaadeen Slovakia uu Smalling damcay inuu kubada xabadka ugu baaso Joe Hart laakiin kubada meel dheer ma gaarin waxaa dhexda ka soo galay Robert Mak balse lugta ayuu kubada la waayay taasoo badbaadisay Three Lions.
England ayaana durbadiiba jawaab ka bixisay iyagoo fursad fiican abuurtay, Daniel Sturridge ayaa kubad fiican u dhigay Daniel Clyne kaasoo si weyn ciyaarta uga dhex muuqday laakiin darbadii Clyne waxa ay ku dhacday goolhayaha kaasoo kooner u saaray.
Rooney iyo Delle Alli ayuu bedel ku soo geliyay Roy Hodgson ciyaarta markii ay socotay saacad, Delle Alli ayaana fursad qaali ah helay ka dib karoos uu soo dhigay Henderson oo uu darbo fiican la helay, laakiin waxaa xariiqda goosha ka soo badbaadiyay daafaca Slovakia Martin Skrtel.
England ayaa wax walba sameysay laakiin waa ay awoodi waayeen inay dhaafaan xulka Slovakia waxaana ay ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro goolal la;aan ah, taasoo keentay in England ay ku soo baxdo kaalinta labaad ee Group B. Slovakia weli rajo fiican ayay ka qabtaa inay ka mid noqoto afarta xul ee ugu dhibcaha badan xulalka kaalimaha seddexaad ku dhameysta.